Angano 14 ny coronavirus tsy mila atahoranao - Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Vaovao | Desambra 2021
Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Biby Fiompy News Orinasa, Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Fialam-Boly Mpanao Gazety Vaovao, Wellness Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Fahasalamana Lalao Fiaraha-Monina Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Vaovao Fiaraha-Monina, Fahasalamana Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Community, Company Orinasa, Vaovao
Tena >> Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Vaovao >> Angano 14 momba ny coronavirus-ary inona no marina
CORONAVIRUS UPDATE: Rehefa mianatra bebe kokoa momba ny coronavirus ny vaovao, dia niova ny vaovao sy ny vaovao. Raha mila ny farany amin'ny areti-mifindra COVID-19 dia tsidiho ny Ivotoerana fanaraha-maso sy fisorohana aretina .
Ny fampahalalana diso momba ny coronavirus vaovao dia miparitaka toy ny virus iray. Ny fihanaky ny valanaretina coronavirus (COVID-19) amin'izao fotoana izao dia manana izao tontolo izao, ary miaraka amin'ny haino aman-jery sosialy mora azo, ny fahazoana vaovao marina dia mora kokoa noho ny hatramin'izay. Mampalahelo fa mora ny mampita vaovao tsy marina. Sarotra ny hahafantatra izay tokony hatao sy ny tokony hampiahiahy anao. Ireto misy angano mahazatra indrindra mivezivezy momba ny COVID-19, sy ny zava-misy ilain'ny coronavirus ilainao.
Famintinana ny zava-misy momba ny coronavirus:
Coronavirus dia tsy mitovy amin'ny gripa
Na iza na iza dia afaka tratran'ny virus coronavirus - tsy ny be antitra ihany
Ny ankamaroan'ny olona voan'ny virus coronavirus dia ho tafavoaka velona.
COVID-19 sy SARS dia tsy mitovy
Misy tsy vaksinin'ny coronavirus mbola (misy, na izany aza, maro ny olona eran'izao tontolo izao amin'ny fizahan-toetra / dingana fitsapana)
Antibiotika sy Tamiflu manao tsy manasitrana coronavirus
Ny sarontava tarehy dia fiarovana tsara amin'ny coronavirus eny amin'ny habakabaka
Coronavirus dia tsy mifandraika amin'ny labiera Corona
Hafanana, alikaola ary klôro no tsy fomba tsara hiarovan-tena amin'ny COVID-19
Ny fanafody any an-trano sasany dia mety hanimba bebe kokoa noho ny tsara
Coronavirus dia tsy fanahy iniana noforonina
Ny valanaretina coronavirus voalohany dia nampifandraisina tamin'ny tsenan'ny hazan-dranomasina sy biby velona any Wuhan, Sina
Ny Coronavirus dia azo inoana fa tsy hafindra avy amin'ny biby fiompy ; na izany aza, na dia ambany aza ny risika dia hita izany afaka miely manomboka amin'ny olona ka hatramin'ny biby
Azo inoana fa tsy hahatratra ny COVID-19 ianao amin'ny fanokafana fonosana na handefasana mailaka
Hevi-diso # 1: Ny Coronavirus dia mitovy amin'ny gripa
Coronavirus sy ny gripa manana zavatra itoviana: soritr'aretina, ahoana ny fiparitahany, ary ny zava-manahirana azy. Saingy, izy ireo dia samy hafa fepetra: Coronavirus dia avy fianakaviana viral iray hafa noho ny gripa (ny sery).
ny soritr'aretin'ny coronavirus dia mety hitovy amin'ny gripa sy ny aretin'ny taovam-pisefoana hafa, ao anatin'izany ny tazo, kohaka, ary sempotra. Ho fanampin'ireo soritr'aretina mitovy amin'izany, ny viriosy roa dia miparitaka indrindra amin'ny olona tsirairay amin'ny alàlan'ny vongan-drano rehefa mitsoka, mikohaka na miresaka (eo amin'ny enina metatra ny halaviran'ny olona iray).
Fanampin'izany, ny coronavirus dia miparitaka amin'ny fikasihana ny vongan-tsindrona voan'ny aretina avy eo ary avy eo mikasika ny tarehy. Ny olona iray voan'ny gripa dia mifindra andro maromaro alohan'ny hisehoan'ny soritr'aretina. Toy izany koa amin'ny coronavirus: The vanim-potoana fampidirana am-bava ho an'ny coronavirus dia dimy andro, fa ny fe-potoana fanamoriana lava indrindra dia 27 andro.
Ireo viriosy roa ireo dia mety miteraka fahasarotana lehibe izay mety misy ny fijanonana any amin'ny hopitaly na mety hahafaty mihitsy aza - saingy tsy mitovy ny taham-pahafatesana sy ny trangana virus coronavirus ankehitriny. Ny tahan'ny fahafatesan'ny coronavirus dia avo kokoa noho ny gripa ary ny virus coronavirus dia mifindra bebe kokoa.
Hevi-diso # 2: Ny zokiolona ihany no voan'ny Coronavirus
raha ny olona antitra sy ny olona manana aretina toa voan'ny virus mahery vaika kokoa, na iza na iza afaka misambotra azy ary manaparitaka azy. Mila mitandrina ny tsirairay.
Mifandraika: Ny tokony hataon'ny zokiolona hiarovany tena amin'ny coronavirus
Hevi-diso # 3: Mety hamono anao ny coronavirus
Ny ankamaroan'ny olona voan'ny virus coronavirus dia ho tafavoaka velona. Ny tahan'ny maty dia mbola voafaritra sy miovaova araky ny firenena: Jereo ny angona farany Eto . Amin'ireo fahafatesana ireo dia manana an ny toe-pahasalamana toy ny diabeta, fiakaran'ny tosidrà, COPD, na aretim-po, na voan'ny immunocompromised amin'ny fomba sasany. Na dia tokony horaisina am-pahamatorana aza izany, indrindra raha mikasika ireo olona marefo, ary na dia miova aza ireo antontan'isa ireo rehefa mahazo angon-drakitra misimisy kokoa isika, dia mampahery ny mahatadidy fa ny ankamaroan'ny olona dia sitrana amin'ny aretina.
Hevi-diso # 4: Ny COVID-19 dia mitovy amin'ny fiparitahan'ny SARS tamin'ny 2002-2003
aza COVID-19 sy SARS-CoV (izay nahatonga ny valanaretina 2002-2003) dia izy roa ireo coronavirus , tsy viriosy mitovy izy ireo. Na dia antsoina hoe coronavirus aza ny COVID-19, dia viriosy marobe tokoa ny coronavirus, miaraka amin'ny SARS-CoV-2 (ilay virus izay miteraka COVID-19) sy ny SARS-CoV dia karazany roa fotsiny.
Toy ny gripa, ny COVID-19 coronavirus vaovao dia mizara fitoviana kely amin'ny fitrandrahana SARS (izay midika hoe aretin'ny taovam-pisefoana mahery vaika) tamin'ny 2002-2003, fa misy ihany koa ny tsy fitovizany. Ny tahan'ny maty dia toa ambany noho ny 10% taham-pahafatesana ao amin'ny SARS , hoy izy Anis Rehman , MD, profesora mpanampy amin'ny fitsaboana ao amin'ny Southern Illinois University School of Medicine ary mpikambana ao amin'ny birao famerenana mpitsabo SingleCare. Na izany aza, raha ampitahaina amin'ny valan'ny SARS na MERS-CoV, dia azo ampitaina tokoa ny coronavirus na dia tsy mahafaty aza, hoy izy.
Hevi-diso # 5: Misy vaksinin'ny coronavirus
Tsy misy vaksin [ankatoavin'ny FDA] amin'ity virus ity anefa mpikaroka dia miasa amin'ny fampandrosoana ny iray , hoy i Kristi Torres, Pharm.D., mpivarotra fanafody ao amin'ny Farmasia Tarrytown Expocare ary mpikambana iray ao amin'ny birao fanaraha-maso ara-pitsaboana SingleCare.
Ny fitsapana ny olombelona dia nanomboka tamin'ny vaksinina manohitra ny coronavirus tamin'ny 16 martsa. Ny mpahay siansa ao amin'ny Kaiser Permanente Washington Research Institute dia nanomboka fitsapana ara-pitsaboana olombelona tamin'ny fampiasana vaksinin'ny coronavirus novokarin'i Moderna Inc. Na izany aza, io vaksinin io dia mety tsy vonona ho an'ny besinimaro mandritra ny herintaona.
Mandritra izany fotoana izany dia tokony mbola hahazo ny anao ianao voan'ny gripa , ary ny vaksinina rehetra natolotra anao. Na dia tsy hiaro amin'ny coronavirus aza izy ireo dia mbola manan-danja amin'ny fahasalamanao ihany.
Hevi-diso # 6: Ny antibiotika dia afaka misoroka ny coronavirus / Tamiflu dia afaka manampy amin'ny soritr'aretin'ny coronavirus
Ny antibiotika dia mitsabo ny aretina mikraoba, ary tsy misy fiatraikany amin'ny coronavirus (na virus). Ary na Tamiflu dia afaka manampy amin'ny soritr'aretin'ny gripa; tsy misy fiatraikany amin'ny soritr'aretin'ny coronavirus.
Tsy misy fitsaboana manokana amin'izao fotoana izao, ary ny marary voan'ny coronavirus dia mila omena fanampiana manamaivana ny soritr'aretina ary harahi-maso akaiky, hoy Ramzi Yacoub, Pharm.D., Tompon'andraikitra voalohany amin'ny fivarotam-panafody SingleCare .
Mifandraika: Ny zavatra fantatsika momba ny fitsaboana COVID-19 ankehitriny
Hevi-diso # 7: ny sarontava tarehy dia tsy afaka miaro anao amin'ny coronavirus
Ny Ivotoerana fanaraha-maso sy fisorohana aretina (CDC) dia mamporisika ny olona hisaron-tava amin'ny saron-tava rehefa eny amin'ny toerana be olona. Mpivarotra maro sy ôrdônansy amin'ny tanàna sy ny fanjakana no mila sarontava. Ny fisaronan'ny tarehy dia hanampy amin'ny fisorohana ny vongan-tsofina mandeha amin'ny rivotra sy amin'ny olon-kafa.
Ireo izay voaroaka amin'ity tolo-kevitra ity dia zaza 2 sy tanora kokoa ary ireo izay manana olana amin'ny fisefoseho.
Mpamatsy fahasalamana ary ireo mikarakara olona voan'ny coronavirus dia mila manao sarontava ihany koa; ny saron-tava fandidiana sy ny respirator dia tokony hatokana ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana mitsikera.
Hevi-diso # 8: Ny coronavirus dia mifandray amin'ny labiera Corona
Anarana mitovy ihany io, tsy misy fifandraisana hafa.
Hevi-diso # 9: Ny fampiasana fanamainana tanana na jiro UV, na fanosotra alikaola na klôlôra ny vatanao dia fomba tsara hiarovana ny tenanao amin'ny coronavirus
Tsy mandaitra ary mety hampidi-doza! Ny fiarovan-tenanao tsara indrindra dia ny fanasan-tànana matetika amin'ny fomba taloha farafahakeliny 20 segondra amin'ny fampiasana savony sy rano mafana. Dr. Yacoub dia manolotra ireto fomba manaraka ireto ihany koa:
Aza mifanerasera akaiky amin'ireo marary - manazàha ny halaviran'ny fiaraha-monina farafahakeliny 6 metatra ary manaova sarontava.
Aza mikasika ny masonao, ny oronao ary ny vavanao.
Sasao ny tananao ary mamono otrikaina sy fampiasa matetika izay voakasik'izany.
Aza atao mandeha raha tsy ilaina, indrindra any amin'ireo faritra be aretina.
Mifandraika: Ny tokony hatao sy ny tsy tokony hatao amin'ny fiomanana amin'ny coronavirus
Hevi-diso # 10: Ny fitsaboana ao an-trano toy ny fihinanana tongolo lay, ny fanosorana menaka sesame, na ny fanasana ireo lalan-orona dia mahomby amin'ny coronavirus
Ny fanasana ny orona amin'ny rano sy ny fanandramana fanafody ao an-trano dia tsy hanampy amin'ny fisorohana aretina amin'ny virus coronavirus, hoy ny Dr. Rehman.
Nanampy i Dr. Torres: Ny lalan'ny orona dia tsy tokony hosasana amin'ny rano fisotro mihitsy. Ny fampiasana ny rosy sinus dia mety hanamaivana ny soritr'aretin'ny fitohanana, nefa tsy hisorohana ny coronavirus, na virus hafa, toy ny gripa na sery mahazatra.
Mety hampidi-doza koa ny fanafody sasany ao an-trano.
Hevi-diso # 11: fanahy iniana namboarina ny coronavirus
Teoria tsikombakomba tsy mitombina io. Azo inoana fa niandoha biby izy io ary nivoatra tany amin'ny tanibe Shina amin'ny faritanin'i Hubei.
Hevi-diso # 12: Ny coronavirus dia naparitaka tamin'ny olombelona tamin'ny lasopy ramanavy
Ny manam-pahaizana momba ny epidemiolojia dia nilaza fa ny coronavirus dia tsy avy tamin'ny lasopy bat. Marary maro amin'ny ivon'ilay valan'aretina tao Wuhan no nifandray tamin'ny hazan-dranomasina sy tsenan'ny biby velona, ​​noho izany dia ahiana ho niparitaka ny isan'ny biby, Araka ny CDC . Nanomboka tamin'izay dia nifindra tamina olona iray ilay virus.
Hevi-diso # 13: Azonao atao ny misambotra ny coronavirus amin'ny biby fiompinao na manome azy ireo
Ny CDC dia milaza fa ny biby fiompy aza mitana andraikitra lehibe amin'ny fanaparitahana coronavirus satria biby fiompy vitsivitsy monja no nilaza fa voan'ny virus, azo inoana fa avy amin'ny olombelona no voan'ny virus. Na izany aza, ny fampiharana fahadiovana tsara manodidina ny biby, ao anatin'izany ny fanasana tanana, dia tsy maintsy ilaina foana satria misy aretina hafa azo miparitaka hatrany amin'ny biby mankany amin'ny olona.
Hevi-diso # 14: Tsy azo antoka ny fonosana sy ny mailaka
Ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (OMS) dia nilaza fa tsy maharitra maharitra amin'ny zavatra ny viriosy, toy ny taratasy sy fonosana, ary azo antoka ny fandraisana mailaka sy fonosana.
Loharano ho an'ny fanavaozana coronavirus:
Satria vaovao ny valanaretina coronavirus dia dinihina tsara ary avoaka matetika ny data vaovao momba ilay virus. Zava-dehibe ny mijanona ho vaovao hatrany amin'ireo fivoarana farany-fa tsarovy ny famotopotorana ireo loharano ary zahao ny zava-misy. Ireto misy loharanom-pahalalana vitsivitsy atokisantsika:
Aretina Coronavirus 2019 (CDC)
Valanaretina Coronavirus (COVID-19) (OMS)
Aretina Coronavirus 2019 vs. flu (Johns Hopkins)
Fampahalalana Coronavirus 2019 momba ny dia (CDC)
Toeram-baovao Coronavirus (SingleCare)
Miomàna fa aza mikorontana. Henoy ny tompon'andraikitra amin'ny fahasalamam-bahoaka, ary tsarovy ny manasa tanana!
Ny fihenan'ny laxatives
Fitsapana ara-pitsaboana 7 ilainao rehefa feno 30 ianao
fatran'ny gliokaozy normal ho an'ny diabeta karazana 1
maharitra hafiriana ny drafitra b aorian'izany
vokatry ny tabilao fampitahana pilina fanabeazana aizana
afaka mahazo avo amin'ny prozac ve ianao?
ahoana no fanasitranana haingana ny gripa?